कथा : बिद्रोह - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← लघुकथा : सजीव-चित्र
बाल कविता : सानी मेरी नानी →
कथा : बिद्रोह
म तिम्रो छोरी रमली । एउटा राक्षसबाट निरन्तर बलात्‍कृत भए पछी सहन नसकेर धेरै टाढा जादैछु । तिमी जस्तो यौनको प्यास मेट्न म पोईल गएकी छुइन । तिमी पोईल गएको आज ठ्याक्कै नौ महिना भएको छ । म स्‍मृतिको पन्ना पल्टाएर नौ महिना पछी फर्किन्छु र त्यो रातको घटना सम्झन्छु । सायद माघे सन्क्रान्तीको दिन थियो । बाटो छेउको हाम्रो घर अनी त्यही घरमा खोलिएको भोजनालय । जगत बहादुर लाहुरे हाम्रो घरमा बास बसेको थियो त्यो रात ।
रातको एक बजे मेरो निन्द्रा खुल्यो । चकमन्न रात । लाहुरेको रेडियोमा हिन्दी सिनेमाको गाना बजिरहेको थियो अचानक मैले पल्लो कोठामा तिमी र लाहुरेको यस्तो बार्तालाप सुने –
“धनमाया,म तिमीलाई छोड्न सक्दिन ।”
“त्यसो भए मलाई लैजानुस् न त ।”
“पक्का जाने हो त ?”
“जान्न होला त हजुरले जाउ भने पछी ।”
“त्यसो भए भोली सखारै हिडौ हामी हुन्छ ?”
तिमीले अन्तिम जवाफ दिए पछी खितिती हासेको सुने मैले । तिमीहरु दुबै जिस्किदै थियौ । चुम्बन गरेको आबाज प्रस्ट सुन्दै थिए म । केही क्षण पछी खाट बज्न थाल्यो । खाट कराइ रह्यो । तिमीहरुले लामो लामो श्वास फेरेको र निरन्तर खाट बजेको कुराबाट त्यता के हुँदैछ भन्ने मैले स्पस्टसँग अनुमान लगाइ सकेको थिए ।
भोलीपल्ट गाउ भरी हल्ला फैलियो-धनमाया जगते लाहुरेसँग पोईल गैइन ।
तिमी पोईल गएको छ महिना पछी अचानक एक रात भयानक घटना घट्यो । म सुतिरहेको थिए । कोठा पूर्ण रुपमा अन्धकार थियो । एउटा मानब छाया म सुतेको ठाउँ तिर बढ्दै थियो । म चिच्याउन मात्र के आटेको थिए अचानक त्यो छायाले मलाई ग्वाम्म अङालो हाल्यो ।उ रक्सीले नराम्ररी मातिएको थियो । रक्सिको दुर्गान्धले म दिग्मिगाई रहेकी थिए । एउटा हातले मेरो मुख थुनिदियो । कानमा त्यसले कठोर आबाजमा भन्यो –
“नकरा । अरुले थाहा पाए भने तेरो जीवन बर्बाद हुनेछ ।”
आबाज सुने पछी मेरो पुरै शरीर थरर काम्यो । म रोए । म गिडगिडाए –
“बिन्ती छ,यस्तो पाप नगर ।”
“एक पटक मात्र । फेरी कहिल्यै गर्दिन तिमीलाई यस्तो । आज एक पटक मात्र ।”
मेरा लुगाहरु उतारिन थाले । म रुदै थिए । लुगा उतारिदै थियो । मलाई खाटमा पुरापुर उत्तानो पारीयो । म लाचार थिए । त्यो राक्षस मेरो शरीर माथि लम्पसारियो । मोटो सर्पले मेरो शरीरमा आफ्नो खिल गाड्यो । सर्पले मलाई डस्न थालयो । म तड्पे । म छटपटाए । त्यसले स्वाद मानेर मेरो गाला चुम्यो । मेरा दुई नयनबाट बलिद्र अस्रु धारा बगिरहेको थियो ।
त्यो दिन पछी पनि म बलात्‍कृत बन्ने क्रम रोकिएन । हरेक रात रक्सिले मातिएर आउने त्यो नर पिचाशको ज्यादाती मैले सहिनै रहे । मैले ईज्जतको डरले त्यो राक्षसको ज्यादाती सहने काम गरिरहे । तर सहन शक्तिको पनि सिमा हुदो रहेछ । आखिर मैले बिद्रोह गर्नु पर्‍यो । भयानक बिद्रोह । हिजो राती मैले बलात्कारको क्रमलाई भङ गरिदिए । आखिए सहनशिलताको पराकास्ट नाघे पछी मान्छे बिद्रोही बन्दो रहेछ । मैले पनि बिद्रोह गरे । मैले हिजो राती तिम्रो पूर्व पतिलाई खत्तम पारी दिए । रने नाउको राक्षसलाई मैले हसियाले गिडिदिए । म त्यसलाई बाबु भन्दिन । त्यो राक्षस हो । तिमी पोईल नगएको भए शायद यि सब घटनाहरु घट्दैनथ्यो होला । तिमी प्रती पनि म भित्र खसै कुनै सम्मान छैन । तिमीले पनि आफ्नो मात्र स्वार्थ हेरयौ । रनेको लाश खाट मुनी लडाईंदिएकी छु । बिदा पाउ । उही तिम्री अभागी छोरी-रमली ।
धनमायाले पत्र पढ्दा बिहानको आठ बजेको थियो । पत्र पढिसकेर धनमायाले आशु झारिन । भित्र कता कता औडाहा भएर आयो । भक्कानिदै तिनी तला माथी चढिन । कोठा भित्र छिरेर खाटमा घोप्टो पारीन र सिरकको फेरो मुखमा कोचेर घुक्क घुक्क गर्दै रोईन । यता ठीक त्यही बेला रनेको लाश खाट मुनीबाट निकालेर प्रहरिले आगनमा ल्याएर राखिसकेको थियो । मान्छेहरु जम्मा भएर तमासा हेरिरहेका थिए । उता रमली भने यही समयमा रक्सौलबाट रेल चढेर कतै जादै थिई । झ्याल तिर बसेकी रमलीका नयनहरु आकाश तिर हेरेर टोलाई रहएका थिए । रेल एकतमासले दौडिरहेको थियो ।
This entry was posted in नेपाली कथा and tagged Nawaraj Shameer. Bookmark the permalink.
नेपाली गद्य (3,715)
नेपाली कथा (2,501)
नेपाली काव्य (7,056)
नेपाली गीत (861)
लेख – समीक्षा (434)
हास्य – व्यङ्ग्य (388)
कथा : दीवारानी (१)
कविता : बाल्यकालले डोर्‍याएको जिन्दगी
कविता : नरूनु छोरी
कविता : जिवन कस्तो बनाईस्
कविता : आस्था पालेर बाँचौं
भण्डार कोठा Select Month October 2017 (140) September 2017 (326) August 2017 (348) July 2017 (447) June 2017 (354) May 2017 (380) April 2017 (254) March 2017 (303) February 2017 (260) January 2017 (499) December 2016 (535) November 2016 (381) October 2016 (351) September 2016 (354) August 2016 (269) July 2016 (245) June 2016 (154) May 2016 (166) April 2016 (238) March 2016 (551) February 2016 (539) January 2016 (574) December 2015 (697) November 2015 (464) October 2015 (245) September 2015 (220) August 2015 (215) July 2015 (320) June 2015 (125) May 2015 (118) April 2015 (181) March 2015 (224) February 2015 (122) January 2015 (113) December 2014 (140) November 2014 (109) October 2014 (107) September 2014 (114) August 2014 (216) July 2014 (125) June 2014 (119) May 2014 (152) April 2014 (213) March 2014 (96) February 2014 (202) January 2014 (147) December 2013 (123) November 2013 (118) October 2013 (112) September 2013 (283) August 2013 (530)
Total Visits: 2,692,323
Total Visitors: 499,865